လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၀င်ဆံ့အောင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The house in Kalaw where we stayed from 1957 to 1964
Two Myanmar Journals’ INSULT on ISLLAM and PROPHET MOHAMAD (pbuh) is not only an INSULT on Muslims of Myanmar but must be regarded as INSULT on ALL THE MUSLIMS AROUND THE WORLD »
By M-Media Group အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၄.နှင်းဆီခင်ရေးသည်။
လူဆိုတာက ထီးတည်းနေလို့ရတာမျိုးမဟုတ်လို့ ကိုယ်နှင့်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာ ရှိနေတတ်စမြဲပါ။ အထူးသဖြင့် လှပတဲ့အနာဂတ်ကို ဦးဆောင်နေရာယူကြမယ့် လူငယ်တွေ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလိုက်သင့် ၀င်ဆန့်ဖို့တော့ အရေးကြီးတယ်လေ။ ကိုယ်ဆက်ဆံရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆင်ပြေလို့ ဘာသိဘာသာနေလိုက်တာပါလို့ တချို့လူတွေက ဆိုကြတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီလိုနေပါများရာက အထီးကျန်သလိုခံစားလာရတာမို့ အလိုလို စိတ်တို၊ စိတ်ညစ်ပြီး အလိုမကျဖြစ်လာရော။ တစ်ခုရှိတာက ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကိုယ်နှင့်စရိုက်မတူ ၀ါသနာချင်း ကွာခြားတာမို့ အပေါင်းအသင်းမထားဘဲနေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ တချို့လူတွေရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကလည်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မှန်တယ်လို့ မဆိုသာဘူး။ ကောင်းပြီ။ ရှောင်ကွင်းလို့မရတဲ့ လူ့ဝန်းကျင်မှာ အလိုက်သင့်ဝင်ဆန့်အောင် ကြိုးစားဖို့တော့ လိုပြီလေ။
ဦးဆုံးအနေနှင့်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုပေါ့။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ စကားဟာ အခရာ ကျလှတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ပြောတဲ့စကားရဲ့လေသံက မာနသံ၊ အောက်ကြို့သံ၊ ဒေါသသံနှင့် နှစ်လိုဖွယ်အသံလား။ ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်။ စကားလုံးရွေးချယ်မှုက တူပေမယ့် ပြောလိုက်တဲ့လေသံပေါ်တည်လို့ တစ်ဖက်လူကတုံ့ပြန်တတ်တာ သဘာဝပဲမဟုတ်လား။ တချို့ရှိတယ် ကိုယ့်ရဲ့ပညာ၊ ဥစ္စာနှင့် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းကို လိုက်ပြီး လေသံကမာထန်တယ်၊ တစ်ဖက်လူကိုလျှော့တွက်ပြီး အပေါ်စီးကပြောဆိုဆက်ဆံတယ်။ အပြောခံရသူကတော့ အောင့်သက်သက်ပေါ့။ အားမနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အားနာလို့ပဲဆိုဆို အလိုက်သင့် ခေါင်းငုံ့ခံပြောဆိုနေပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ လုံးဝနှစ်မြို့လက်ခံချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ အဲဒီလိုလူစားမျိုးဟာ လူတကာ ချစ်ခင်လေးစားတာကို မခံရတာကြောင့် လူ့ဝန်းကျင်မှာ ၀င်ဆန့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။
သာယာနာပျော်ဖွယ် စကားမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ကြားချင်သလို သူများတကာကိုလည်း ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်အောင် လေ့ကျင့်ရမှာပါ။ စကားလုတာ၊ အငြင်းသန်တာတွေက ကိုယ့်ကိုအခင်မင်လျော့နည်းစေတတ်ပြီး ဝေးဝေးကရှောင်တတ်ကြတယ်။
လူ့သဘာဝအရပဲဆိုပါတော့။ ကိုယ်ကအကူအညီပေးရတာရှိသလို ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ အကူအညီယူရတာမျိုးလည်းရှိပြန်တယ်။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ၀င်ဆန့်တဲ့သူဟာ အကူအညီပေးဖို့ ၀န်မလေး တတ်သလို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကူညီလေ့ရှိတယ်။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့စေတနာနှင့် အကျိုးဆောင်မှုကို တသသဖြစ်သွားတဲ့ အထိပဲပေါ့။ သူငယ်ချင်းသစ် တစ်ယောက်ရလိုက်ရင် သူ့ဆီကဘာများရပါ့မလဲလို့ အကျိုးမျှော်တာထက် ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားတဲ့သူဟာ အပေါင်းအသင်းအလယ်မှာ အသိအမှတ်ပြုခံရလေ့ရှိတယ်။
ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆံရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို အကောင်းမြင်၊ အကောင်းစိတ်ထားတတ်ဖို့။ ဒါဟာ ဘ၀မှာသာမန်လို့ထင်ရပေမဲ့ သိပ်ကိုအရေးပါပြီး တာသွားတတ်တာမျိုး။ လူတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံသူတွေ မဟုတ်ကြတော့ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်ဆိုတာ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ရှိသားပေါ့။ ဒီတော့ သူများတကာရဲ့ ကောင်းကွက်ကလေးတွေကို မြင်အောင်၊ သိအောင်လုပ်ဖို့ ၀န်မလေးသင့်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ အခက်အခဲမရှိသလောက် ဖြစ်သွားပြီ။
လူငယ်တွေနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားတတ်ကြတဲ့ ဒိုးနပ်စ်မုန့်ဆိုပါတော့။ တစ်ဦးက အဲဒီမုန့်ရဲ့ ချိုစိမ့်တဲ့ အရသာကို သိမြင်သလို၊ နောက်တစ်ဦးက အလယ်မှာ ချိုင့်နေတယ်ဆိုပြီး အပြစ်ပြောတာမျိုးပေါ့။ တကယ်တမ်းပြောရရင် လူတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးလေးတွေရှိကြပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အဆိုးချည်း စုဝေးနေတာ မဟုတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်ကလေးတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးရင် စိတ်ချမ်းသာစရာ ၀န်းကျင်ကောင်း တစ်ခုတော့ ရနိုင်ပါရဲ့။
ဒီကနေ့ခေတ် နည်းပညာတွေ ဆန်းသစ် တိုးတက်လွန်းတာကြောင့် အသိအမြင် ဗဟုသုတတွေကိုလည်း အကျယ်ပြန့်ဆုံးလေ့လာခွင့်ရကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပဆိုင်ရာ လေ့လာ မှတ်သားသင့်တာတွေ မှန်သမျှအတွက် အချိန်ယူကြ ရမှာပါ။ စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုလည်း လက်လှမ်းမီသမျှ ဖတ်မှတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စတာတွေကို လုံးပန်းနေရလို့ အချိန်ပိုမရှိပါဘူးလို့ ဆင်ခြေပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း လေ့လာမှတ်သားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ရက်မှာရှိတဲ့ ၂၄ နာရီ (၁၄၄၀) မိနစ်ထဲက မိနစ်နည်းနည်းလောက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ အသိပညာ ဗဟုသုတပြည့်ဝလာတာနှင့်အမျှ လူ့ဝန်းကျင်မှာ အများကလိုလားလက်ခံသူ၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြောဆိုတတ်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရမှာ အမှန်ပါပဲ။
အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ သူများတကာရဲ့လိုလားနှစ်သက်မှုကို ခံယူချင်သူတွေဟာ အဲဒီလိုလားနှစ်သက်ခံရလောက်မယ့် အရည်အသွေးမျိုးတွေ ရှိနေဖုိ့တော့ လိုအပ်တယ်။ ဆိုပါစို့ သူများကိုစာနာတတ်တာ၊ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတာ၊ အပြောချိုတာ၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီးအကောင်းမြင်တာ နောက်ပြီး လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ရှိတာ စတဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတွေ ကိုယ့်မှာရှိရဲ့လား။ ဒါကိုအသေအချာဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့။ အပေါင်းအသင်းတွေဆီက ကိုယ့်အပေါ်ဆက်ဆံစေချင်တဲ့ အပြောအဆိုအပြုအမှုမျိုးတွေကို၊ ကိုယ်တိုင်က ခံယူချင်သလို ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ပြန်ပြီးပေးဆပ်ဖို့ မမေ့သင့်ဘူး။
အမှန်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မမေ့သင့်ဘူး။ ၀င်ဆန့်သူဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အေးချမ်းကြည်နူးမှုရတာတော့အမှန်။ စိတ်ဖိစီးတင်းကြပ်မှုတွေ လုံးဝမရှိဘူးလို့ မဆိုနိုင်ပေမဲ့ နည်းပါးတယ်။ ဒီတော့လည်း နေပျော်စရာဘ၀လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ တော်တော်လေးနီးစပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း …….
This entry was posted on October 20, 2014 at 1:07 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.